(Redirected from Musasa (mombe))
maluva kana kuti n'ombe (cattle in English) imhuka inopfuwiiwa pamusha. Mombe dzinochengeterwa nyama, kurima, kutakura mutoro, mukaka, dehwe nezvimwewo. Debwe ren'ombe rinokakisa ngoma, rinorukiswa makashu kana kuwaridzwa pokugara. Kareko raigadziriswa sengende dzokusengesa zviyo kana nyama. Mombe inokwanisa kumiririra mutupo semuyenzaniso watinoona pa mutupo wevaera gumbo - vanoshandisa mombe semucherechedzo wemutupo wavo. Vaera gumbo vari vanhurume vanokwanisa kudaidzwa vachinji mombe kana kuti rufura kana kuti madyirapazhe.
MuZimbabwe nemuAfrica yose n'ombe ndibwo vufumi bwunokosheswa zvakanyanya zvikuru sei kumaruwa. Mombe dzinoshandiswa pakuripa roora vuye pamabiko nezvirango zvakasiyana-siyana. Mugore ra 2008 vanhu vazhinji vomuZimbabwe vakashandisa n'ombe semari pakutenga midziyo napakuripa ngava dzakasiyana-siyana kushonganisira dzidzo kuzvikoro. Vazhinji ndivo vakatenga nharembozha dzavo nen'ombe.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mombe&oldid=89309"
Last edited on 31 Nyamavhuvhu 2021, at 11:27
This page was last edited on 31 Nyamavhuvhu 2021, at 11:27.